ကံတရား က အချိန်တန် ရင် သေလုမျောပါးဖြစ်နေချိန်မှာ လည်း ကောက် ခါငင်ခါနဲ့ ကံကောင်း တတ်ပါတယ် – Shwe Yoe
ကံတရား က အချိန်တန် ရင် သေလုမျောပါးဖြစ်နေချိန်မှာ လည်း ကောက် ခါငင်ခါနဲ့ ကံကောင်း တတ်ပါတယ်
ထိုင်းနိုင်ငံနခွန်ဖနုမ်ခရိုင် ဖုန်းစဝမ်မြို့နယ် ဆေးရုံမှာ ကျမ္မာရေးမကောင်းလို့တက်ရောက်ကုသနေတဲ့ နုံချာလှတဲ့အဖိုးအိုနဲ့အဖွားအိုတို့လည်း ယနေ့ထိုင်းထီ ပထမဆုကြီး ဘတ် ၆ သန်းဆုကို ဆွတ်ခူးလိုက်တယ်ဆိုတာသိရလို့ ကုတင်ပေါ်ကလူမမာရဲ့ အပြုံးကရောဂါတစ်ဝက်ကိုသက်သာသွားစေပါပြီ
ဆရာဝန်တွေရော နာစ်တွေပါပျော်နေကြတယ် ဘာဘဲပြောပြော ကွဲကွာနေတဲ့သားသမီးမြေးတစ်သုမကြားမီ အဖိုး တို့အဖွားတို့နားကိုပြုစုဘို့ရောင်လာကြတော့မယ်ထင်ပါတယ်..
နံပါတ်တူထီနှစ်စောင်ထဲ က တစ်စောင်သာကံစမ်းခဲ့ပေမယ့် ယခုလိုကျမ္မာရေးချို့တဲ့နေချိန် ထီထပေါက်တာဟာ ကံထူးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့
ထိုင်းထီက တစ်ခုကောင်းတယ် အက္ခရာစဉ်မပါဘူး ၊ ဘတ် ၆ သန်းဆုကစပြီး ကျန်တဲ့ဆုတွေအားလုံး နံပါတ်တူတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက် ပထမဆုကြီးကိုမျှဝေပေါက်ကြတဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ် ၊ တတ်နိုင်လို့ နံပါတ်တူ ၁၀ စောင်တွဲထိုးနိုင်ရင်လည်း ဘတ်သန်း ၆၀ ပေါက်ခွင့်ရှိပါတယ်..မြန်မာထီဆုကြီး ကို လည်း သိန်းပေါင်း ၁ သောင်းခွဲကို ၅ ထောင်ဆုကြီးအဖြစ် အက္ခရာဖြုတ်ပြီး နံပါတ်တူတွေများများရိုက်နှိပ်ရောင်းသင့်တယ်.
ထိုငျးနိုငျငံနခှနျဖနုမျခရိုငျ ဖုနျးစဝမျမွို့နယျ ဆေးရုံမှာ ကမ်ြမာရေးမကောငျးလို့တကျရောကျကုသနတေဲ့ နုံခြာလှတဲ့အဖိုးအိုနဲ့အဖှားအိုတို့လညျး ယနထေို့ငျးထီ ပထမဆုကွီး ဘတျ ၆ သနျးဆုကို ဆှတျခူးလိုကျတယျဆိုတာသိရလို့ ကုတငျပျေါကလူမမာရဲ့ အပွုံးကရောဂါတဈဝကျကိုသကျသာသှားစပေါပွီ
ဆရာဝနျတှရေော နာဈတှပေါပြျောနကွေတယျ ဘာဘဲပွောပွော ကှဲကှာနတေဲ့သားသမီးမွေးတဈသုမကွားမီ အဖိုး တို့အဖှားတို့နားကိုပွုစုဘို့ရောငျလာကွတော့မယျထငျပါတယျ..
နံပါတျတူထီနှဈစောငျထဲ က တဈစောငျသာကံစမျးခဲ့ပမေယျ့ ယခုလိုကမ်ြမာရေးခြို့တဲ့နခြေိနျ ထီထပေါကျတာဟာ ကံထူးတယျလို့ပွောရမှာပေါ့
ထိုငျးထီက တဈခုကောငျးတယျ အက်ခရာစဉျမပါဘူး ၊ ဘတျ ၆ သနျးဆုကစပွီး ကနျြတဲ့ဆုတှအေားလုံး နံပါတျတူတှအေမြားကွီးရှိတဲ့အတှကျ ပထမဆုကွီးကိုမြှဝပေေါကျကွတဲ့ သူတှလေညျးရှိပါတယျ ၊ တတျနိုငျလို့ နံပါတျတူ ၁၀ စောငျတှဲထိုးနိုငျရငျလညျး ဘတျသနျး ၆၀ ပေါကျခှငျ့ရှိပါတယျ..မွနျမာထီဆုကွီး ကို လညျး သိနျးပေါငျး ၁ သောငျးခှဲကို ၅ ထောငျဆုကွီးအဖွဈ အက်ခရာဖွုတျပွီး နံပါတျတူတှမြေားမြားရိုကျနှိပျရောငျးသငျ့တယျ.
ငယ်ကတည်း က ဒီလို ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး တဲ့ စိတ်ဓါတ်လေး ကိုလဲ လေးစားမိတယ်
အချစ်တွေ ကို ငြင်းပယ်ပြီး singleဘဝ ကို ဂုဏ်ယူစွာ လက်ခံထားကြတဲ့ သူတွေရဲ့ ခံယူချက်များ
‘လူပိန်ချင် တာမျိုး မဟုတ် ပဲ ဗိုက်ခေါက် အဆီ၊ ခါးဆီ၊ ကျော ဆီ လို အဆီပိုတွေပဲ ကျချင် တယ် ဆိုသူများ အတွက် ဆေးနည်းကောင်းလေးပါ’
လိမ်ဆင် နောက်တမျိုး နဲ့ မြန်မာပြည်… SOCIAL MEDIA ပေါ် က PAGE တွေ GROUP တွေ မှာ ဖုန်းနံပါတ် ထားခဲ့ တဲ့ လူတွေ သတိ ထားပါ